Pierre Reverdy. Afọ ncheta ọnwụ ya. Ekele | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Pierre reverdy bụ onye French na-ede uri a mụrụ na Narbonne. Ọ bụ otu n'ime ndị na-enye ume nkwanye ugwu na Ya na ndị ọkachamara na ndị edemede dị mkpa dị ka Picasso ma ọ bụ Apollinaire nwere mmekọrịta. Ọ nwụrụ ụbọchị dịka taa na Solesmes na 1960. Nke a bụ a nhọrọ nke poems ịgụ ya, cheta ya ma ọ bụ mara ya.
1 Pierre Reverdy - Nhọrọ nke abu
1.1 Ifufe na mmụọ nsọ
1.2 Obi ike
1.3 Ihu ihu na ihu
Pierre Reverdy - Nhọrọ nke abu
Ifufe na mmụọ nsọ
Ọ bụ ihe pụrụ iche chimera. Isi, dị elu karịa ala ahụ, dị n'etiti wires abụọ ahụ na nkwụsị na ịnọ, ọ dịghị ihe na-agagharị.
Isi a na-amaghị ama na-ekwu okwu ma anaghị m aghọta okwu, anaghị m anụ ụda - ala megide ala. Anọ m na mgbe niile n’okporo ụzọ dị n’ihu m na m na-ele anya; M na-ele anya na okwu ọ ga-atụba n'ihu. Isi na-ekwu okwu ma anaghị m anụ ihe ọ bụla, ifufe na-achụsasị ihe niile.
Oh oké ifufe, na-akwa emo ma ọ bụ na-agba ọchịchịrị, achọrọ m ka ọnwụ gị. Okwa m n’ufu okpu nke I naara. Enweghị m ihe ọ bụla ọzọ; ma asị m na-adịgide, ahụhụ karịrị onwe gị!
Agaghị m achọ ịhụ ihu iru gị ọzọ
Ntutu isi gị na ntutu gị n’ikuku
M gara gafere obodo
N'okpuru oke ọhịa ndị ahụ
Abalị na ehihie
Anyanwụ na mmiri ozuzo
N'okpuru ụkwụ m ndị nwụrụ anwụ epupụta crunched
Mgbe ụfọdụ ọnwa na-awa
Anyị zutere ihu na ihu ọzọ
Na-ele anyị anya n’ekwughị ihe ọ bụla
Enweghị m ohere zuru ezu ịga ọzọ
E kegidere m n’elu osisi ogologo oge
Ye akwa ima fo ke iso mi
Ọ na-ewute karịa nrọ ọjọọ
Otu onye ka ukwuu karịa gị mechara hapụ m
Anya nile na-ele m anya na-erute m
Na adịghị ike a ị na - enweghị ike ịlụ ọgụ
M na-agba ọsọ ọsọ na ihe ọjọọ
N'ebe ike nke na-ebuli ọkpọ ya dị ka ngwá agha
Banyere ogologo anụ nke dọwara m n'ụtọ gị na mbọ ya
Ewezuga nhịahụ aka gị dị nro
M na-eku ume n'elu m akpa ume
Gafere mba iji gafee oke ọhịa
N'ebe ọrụ ebube obodo ebe obi m na-akụ
Ihu ihu na ihu
Ọ na-aga n'ihu ma isi ike nke ihere ya na-egosipụta ahụ iru ala ya.
Anya ndị ahụ anaghị ahapụ ụkwụ gị. Ihe niile na-enwu na anya ndị ahụ
site na ebe echiche ọjọọ na-esi apụta, ije ije ọsọsọ ya.
N'azụ ụlọ ahụ ihe oyiyi a maara dị ogologo. Aka gị gbatịrị agbatị
agaba na nke gi. Ọ na-ahụ naanị nke ahụ; ma na mberede ọ sụrụ ngọngọ
megide onwe ya.
Dim motley ọhụụ na isi ya, ị gbapụrụ nke m. Nwere kpakpando
na anumanu nke ala ahu, ndi ala ahu na nwanyi, ha g useji ha me ihe.
Oke Osimiri amawo jijiji, oké osimiri amawo m jijiji, ọ bụkwa ya natara stampụ niile.
Mee ngwa ngwa kpochapu mkpofu nke ọ chọtara, ihe niile nyere iwu ma adị m
isi m na-azọpịa ihe ndị na-emebi emebi.
Ọ bụrụ na ị kwenyere, akara aka, na m nwere ike ịhapụ, ị gaara enye m nku.
Okporo ámá ahụ gbara ọchịchịrị ma ọdụ ahụ ahapụghị akara ya.
Ọ ga-amasị m ịpụ ma ha jide ọnụ ụzọ m. Ma n'ebe ahụ
onye lelee ya oriọna anyụ.
Ọ bụ ezie na okwu ndị ahụ bụ naanị onyinyo, ọkwa
ha na-aga n'ihu na palisades. Gee ntị, ịnweghị ike ịnụ ọkwa nke ọ bụla
ịnyịnya. Agbanyeghị, ọkwá dị elu banyere otu onye
onye na-agba egwu na ihe niile furu efu, n'azu oghere. Naanị abalị
mara ebe ha na-ezuko. Mgbe chi bọrọ ha ga-eyi uwe
agba ya ndị mara mma. Ugbu a, ihe niile gbara nkịtị. Igwe na-efegharị na ọnwa
ọ na-ezo n’etiti anwụrụ ọkụ. Ogbi na ahụghị ihe ndị uwe ojii
ha na-edebe iwu.
Mkpịsị aka m na-agba ọbara
M na-edegara gị
Ọchịchị nke ndị eze ochie ahụ agwụla
Nrọ bụ ham
Nke ahụ kwụgidere n’uko ụlọ
Na ntụ si na sịga gị
Nwere ìhè niile
Na gbagọrọ agbagọ n'okporo ụzọ
Osisi ndị gbara ọbara
Ọbara na pines
Na ndị na-agafe na ahịhịa juru
N'ehihie ikwiikwii mbụ hiri ụra
M ụbigara mmanya ókè
Kwụ na-egbu m n'akụkụ
Eluigwe na-ejidekwa m
Igwe nke m na-asa anya m n’ụtụtụ ọ bụla
Isi mmalite: Web de Iji ọkara olu
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Genres » Abụọ » Pierre Reverdy. Afọ ncheta ọnwụ ya. Eke